လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖွယ်ရာကာလ (Pride month) ကိုကျင်းပရာတွင် လူမည်း LGBTQ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍအား ချန်လှပ်ထား၍မရနိုင် – CAN-Myanmar
ဇွန်လ၁ရက်နေ့စလိုက်တာနဲ့ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူLGBTQတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေအတွက်ပတ်သတ်ပြီး အတိတ်ကိုတဖန်ပြန်လည်အောက်မေ့ဖို့ရာ ပြောင်းလဲတိုးတက်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ရာနဲ့ အသိပညာပေးဖို့ရာ အချိန်ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖွယ်ရာကာလ (Pride month) ရဲ့အစကို ရောက်ပြီပေါ့။. ဒီနှစ်ရဲ့ Pride month ကျင်းပပုံက ခါတိုင်းနှစ်တွေနဲ့ မတူပဲ တမျိုး ကွဲပြားနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလှုပ်ရှားမှုမြစ်ဖျားခံအစပြုခဲ့ရာနဲ့ လူမည်း LGBTQ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ ဝါယမစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမပါပဲ လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားမှု ဆိုတာ ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို တစ်ဖန်ပြန်လည်အောက်မေ့ဖို့ရာ ပိုလို့အရေးပါတဲ့ အချိန်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
စတုန်းဝေါ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုဟာဆိုရင် ဂရင်းဝစ်ချ်ရွာမှာရှိတဲ့ “စတုန်းဝေါအင်း”လို့ခေါ်တဲ့ ဂေးကလပ်တစ်ခုကို ၁၉၆၉ခုနှစ်ဇွန်လ ၂၈ရက်မှာ ရဲတွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရာကနေ အစပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြမ်းဖက်စီးနင်းမှုကနေအစပြုပြီး ရဲအရာရှိတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ အဲ့ဒီကလပ်ကိုလာကြတဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူ LGBTတွေ အနီးနားကသူတွေစုပေါင်း ဆန္ဒပြကြရာကနေ နယူးရော့ခ် တစ်မြို့လုံးမှာ လူထောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက နယူးရော့ခ်မြို့မှာဆိုရင် လိင်တူဆန့်ကျင်တဲ့ဥပဒေတွေ အရမ်းတင်းကြပ်ခဲ့ပြီး ရဲတွေရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေလဲအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုအပြီးများမကြာခင်မှာပဲ LGBTQ အခွင့်အရေးအတွက် ဆန္ဒပြမှုတွေဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် စတုန်းဝေါဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကို လိင်တူချစ်သူတို့အတွက်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကို အားကောင်းစေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု အများကြဆိုကြပါတယ်။ ဒီဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေရဲ့တစ်နှစ်အကြာမှာ “ခရစ္စတိုဖာ လမ်းလွတ်မြောက်ရေးနေ့” လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပထမဆုံး လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖွယ်ရာကျင်းပမှူ (Pride Celebration) ကို နယူ့ရော့ခ်မြို့ရှိ စင်ထရယ်ပါ့ခ် ဥယျာဉ် (Central Park) မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
စတုန်းဝေါလှုပ်ရှားဆန္ဒပြမှုမှာ လူမည်း လိင်စိတ်ကွဲပြားသူ LGBTQ တွေအမြောက်အများပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရေးအပါဆုံး LGBTQ အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ တွေထဲတစ်ယောက်ကတော့ စတုန်းဝေါဆန္ဒပြလှုပ်ရှားတွေအတွင်းတုန်းကဟစ်ကြွေးသံတွေကိုရှေ့ကနေတိုင်ပေးခဲ့တယ်လို့လူသိများခဲ့တဲ့ လူမည်း ကွီးယား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မာရှာ ပီဂျွန်ဆင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မာရှာဟာ လက်တင်နွယ်ဖွား ကွီးယား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဆယ်လ်ဗီရာ ရီဗာနဲ့ပူးပေါင်း ပြီး LGBTQ လူငယ်တွေ အထူးသဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲနေထိုင်သူ အိမ်ခြေယာမဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက်အဓိကကြိုးပမ်းပေးခဲ့တဲ့ S.T.A.R (လမ်းပေါ်မှ တော်လှန်သော ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်ကြသူများ) အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ မာရှာ့ဟာ ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါ ကပ်ဆိုက်ရောက်ချိန်အတွင်းကလုပ်အားပေးတက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့မှုကြောင့်လည်း အမှတ်ရခံရပါတယ်။ မာရှာကော ဆယ်လ်ဗွီရာရောက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်၍ ကပြဖျော်ဖြေသူ (Drag Queen) တွေအဖြစ်ခံယူခဲ့ကြပါတယ်။
တခြားအရေးပါတဲ့ လူမည်း LGBTQ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ယောက်ကတော့ စတိုမီ ဒီလာဗယ်ရီ လို့အမည်ရတဲ့ လိင်တူချင်းစုံမက်သူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေရှိနေပေမယ့် မျက်မြင်သက်သေတွေအမြောက်အများကနေပြီး ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုအတွင်း စတိုမီကနေ ရဲအရာရှိတစ်ဦးကို လက်သီးနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာဖရိကန်နွယ်ဖွားအမေရီကန်တို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်ဆိုင်ရာအသင်းဖြစ်တဲ့ Blackpast ကဆိုပါတယ်။
စတိုမီဟာစတုန်းဝေါအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများအဖွဲ့အစည်းရဲ့တက်ကြွတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့အတွင်းမှာ ဒု ဥက္ကဌအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ စထိုမီဟာ နိုက်ကလပ်အစောင့် နဲ့အဆိုတော်လည်းလုပ်ခဲ့ပြီး LGBTQ တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဆန့်ကျင်ရန် အသိပညာပေးသူအဖြစ်လည်းလူသိများခဲ့ပါတယ်။ LGBTQ အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုအားကောင်းလာဖို့ရာ တာဝန်ယူကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ တခြားလူမည်းကွီးယား တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အများအပြားလည်းရှိပါသေးတယ်။
လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖွယ်ရာကာလ (Pride month) မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ သူတို့တွေကိုအောက်မေ့သတိရ လွမ်းဆွတ် ဂုဏ်ပြုကျင်းပဖို့ရာ အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေသာမရှိခဲ့လို့ရှိရင် လိင်စိတ်ကွဲပြားသူတို့ရဲ့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားမှု (Pride) ဆိုတာရှိလာလိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။.
“၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စတုန်းဝေါ တော်လှန်ဆန္ဒပြပွဲဆန့်ကျင်ပွဲမှာတုန်းက အရောင်အသွေးစုံ LGBTQ တွေအများအပြား ဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅၁ နှစ်ကျော်က အဲ့ဒီဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ သတ္တိတွေ ခွန်အားတွေသာမပါခဲ့လို့ရှိရင်LGBTQတွေရဲ့ ဖြစ်တည်မှုအပေါ်ကိုလက်ခံနိုင်မှုတွေ ညီမျှတခြင်းတွေကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်ဖို့ရာ လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူး” အမေရိကန် LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့အစည်း GLADD ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဆာရာ ကိတ် အဲလစ်စ် ကပြောပါတယ်။
ဆက်ပြီးတော့ “ဒီနှစ်ရဲ့ Pride month ကာလမှာ ကျွန်မတို့တွေ လူမည်း LGBTQ တွေရဲ့အသံတွေကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ထွက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးရမယ်။ ကျွန်မတို့တွေဟာ Prideလှုပ်ရှားမှုတွေရယ် အရေးပါသော လူမည်းတို့ရဲ့ဘဝများ(Black lives matter) လှုပ်ရှားမှု ကာလနှစ်ခုကြားကိုရောက်နေပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုကို ရောပြီးကျင်းပမပေးနိုင်ခဲ့ရင် Pride ဆိုရှိလာလိမ့်မှာမဟုတ်ကြောင်းသတိချပ်စေလိုပါတယ်” လို့သူကပြောပါတယ်။
ဒီသမိုင်းကြောင်းဟာဆိုရင် ဂေး၊ မိန်းမလျာ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်၍ ကပြဖျော်ဖြေသူ (Drag Queen) လို့ဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ မာရှာပီဂျွန်ဆင်ရဲ့ အကြောင်းကို ပိုပြီးတိတိကျကျသိရှိပြီး ပြန်လည်မြင်ယောင်လာစေနိုင်ဖို့ရာ အောက်မေ့သတိရဖွယ် တင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Source: Here’s Your Reminder That Pride Would Not Exist If It Weren’t For Black LGBTQ Activists
U.S LGBTIQAs Rights